प्रधानमन्त्री ओलीको मृर्गौला बुधबार प्रत्यारोपण हुँदै, को हुन मृर्गौला दिने महिला ? – अभियान पोष्ट
प्रधानमन्त्री ओलीको मृर्गौला बुधबार प्रत्यारोपण हुँदै, को हुन मृर्गौला दिने महिला ?
प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटक मृर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी भएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो पटक मृर्गौला देशभित्रै प्रत्यारोपण देशभित्रै हुने भएको छ ।
मृर्गौला प्रत्यारोपणको लागि ओली भोलि अस्पताल भर्ना हुने भएका छन् । सोमबार बसेको (नेकपा)को सचिवलय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले बुधबार मृर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागेको जानकारी दिएका थिए । बैठकपछि प्रबक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधनमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली भोलि अस्पताल भर्ना हुने संचारकर्मीलाई जानकारी दिए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने तयारी भइरहेको छ । ओलीले पहिलो मृर्गौला भारतमा प्रत्यारोपण गरेका थिए ।
आजको बैठक ओलीको मृर्गौला प्रत्यरोपणबारे जानकरीलगायत सामान्य भलाकुसारी बाहेक खास विषयमा प्रवेश नगरेको बताइएको छ । राष्ट्रियसभामा कसलाई पठाउने भन्ने जारी विवादमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएपनि त्यसमा प्रवेश नै नगरेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोस्रो पटक पनि महिला नै मृर्गौला दिने भएकी छन् । पहिलो पटक भाइ बुहारीले दिएपनि यो पटक मृर्गौला दिने महिलाको परिचय गोप्य राखिएको छ । तर मृर्गौला दिने महिला ओलीको नातिनी पर्ने बताइएको छ । उनीसँग म्याच भएपछि दिने र लिने कुराको टुंगो लागिसकेको छ । परिचय गोप्य राखिएकोले उनी को हुन र कति वर्षकी भइन् भन्नेबारे केही जानकारी खुलेको छैन ।